Fahazarana miantsena amin'ny finday eran'izao tontolo izao » Martech Zone
Alarobia, Novambra 21, 2012 Adam Small
Ny tetezamita amin'ny fanaovana fividianana an-tserasera amin'ny alàlan'ny fitaovana finday dia tsy vao maika mitombo fa manjary mipoaka. Raha an-tserasera ny orinasanao fivarotana nefa tsy mandeha amin'ny finday, dia manimba ny varotrao ianao amin'ny tsy firaharahana vondrona mpanjifa manimba sy mitombo. Ny fampiasam-bola amin'ny vahaolana amin'ny finday sy ny fampiharana finday / takelaka dia tokony ho lohalaharana amin'ny lisitry ny laharam-pahamehanao raha mbola tsy vitanao izany.
Mobify namakafaka ny hetsika 2012 an'ny mpivarotra 200 tapitrisa amin'ny tranokalan'ny varotra finday ampiasain'ny Mobify Cloud hamaritana izay firenena matetika no miantsena eny an-dalana. Tao amin'ny fanadihadianay ny angon-drakitra dia naniry ny hahafantatra izay firenena mitarika ny fitiavany ny vokatra Apple toa ny iPhones, iPad ary iPods izahay.
Mobify Cloud dia manana tranokala 20,000 100 mahery sy vola mitentina $ 20 tapitrisa mahery amin'ny vola miditra amin'ny varotra finday, mahatratra XNUMX% amin'ireo mpamandrika finday avo lenta eran-tany.
Tags: edgecastmanetsiketsikafifanakalozana findayecommerce findayfinday-barotra